काठमाडौँको यूएन पार्कमा गोली चल्यो: गुण्डा नाईके अशोक लामामाथि प्रहरीको इन्काउन्टर
जेठ २८, २०७५ BNNTV
काठमाडौं । सोमबार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गण्डा नाईके आशोक लामाको इन्काउन्टर गरेको छ। काठमाडौंको शंखमुलस्थित यूएन पार्कमा रहेका गुण्डा नाइके अशोक लामाले अपराध महाशाखाको टोली माथी गोली प्रहार गरेपछि प्रहरीले फायर खोलेको थियो।
ज्यान मार्ने उद्योग र अन्य सार्वजनिक अपराधमा पनि मुद्दा प्रहरीको वान्टेड सूचीमा रहेका लामालाई पक्राउ गर्न महाशाखाको टोली त्यहाँ गएको थियो। तर, उनी उल्टैमाथि प्रहरीविरुद्ध जाइलागेपछि गोली चलाएको महाशाखाले जनाएको छ ।
यसअघि काठमाडौँमा सक्रिय गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी ‘चरी’, कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’ लागयतका गुण्डाहरुलाई प्रहरीले इन्काउन्टर गरी मारिसकेको छ। त्यसयता राजधानीमा सक्रिय गुण्डाहरुको खोजी भैरहेको थियो।
आज भएको घटनामा गुण्डा नाईके लामा घाईते भएका छन्। उनको यतिबेला वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको खुट्टामा गोली लागेको छ। उनको साथबाट एक पेस्तोल र दुई राउन्ड गोली बरामद गरिएको छ।
प्रकाशित : सोमबार, जेठ २८, २०७५१४:०५
आज प्रहरी इन्काउन्टरमा पर्ने ‘गुण्डा नाइके’ अशोक लामा को हुन् ? कसरी प्रवेश गरे गुण्डागर्दीमा ?
११ सेकेन्ड अगाडि बिगुल न्यूज- SG
१७ मिनेट अगाडि बिगुल न्यूज- SG